Onye edemede Tom Morris na-aza re: Ọ bụrụ na Harry Potter gbara ọsọ General Electric | Martech Zone
Onye edemede Tom Morris na-aza re: Ọ bụrụ na Harry Potter gbara ọsọ General Electric
Thursday, August 3, 2006 Monday, September 23, 2013 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 2 nkeji
Ekwetaghị m na otu ụbọchị gafere na ọ naghị eju m anya na mmetụta nke ịntanetị, Google, na Social Networks na ụwa anyị. Nke ahụ nwere ike ịdị ka 'geeky' mana m laghachiri n'ụlọ taa wee nwee nzaghachi dị mma na post m banyere Tom Morris akwụkwọ, Ọ bụrụ na Harry Potter gbara ọsọ General Electric. Nke ahụ mere ụbọchị m! Ihe ederede na ihe Tom kwuru Ebe a.
Tom erewo m na akwụkwọ ya, naanị site n'ịdị mma iji wepụta oge iji kelee ma kọọ akụkọ ụfọdụ banyere akwụkwọ ya. Olee mgbe anyị na-ahụ nke a taa? Enwetụbeghị m ego na obere akpa Tom, mana mgbe ọ hụrụ ọkwa m site na ụgbụ, ọ dị mma ịkọ hel. Iwepu oge site na nhazi ya iji zaghachi post m agwalarị m na ozi m ga-agụ n'akwụkwọ Tom ga-emejupụta nke a.
O doro anya na m nwetara n'ụlọ ahịa Verizon ebe m zụrụ ekwentị m ọnwa ole na ole gara aga. M guzo n’ahịrị maka nkeji iri ise na ise (ee, nke ahụ bụ eziokwu), gbagoro n’elu tebụl ahụ, enyere m kaadị azụmahịa n’egbughị oge nwere akara ekwentị maka onye m kwesịrị ịkpọ maka ekwentị m tiwara etiwa. Mụ na ụmụ okorobịa ahụ nọrọ ọtụtụ ego, ọ dịghịdị ha ọ happyụ na ha hụrụ m!
A mpempe akwụkwọ… Edere m Tom ma jiri njakịrị gwa ya na abụghị m onye na-akwado Harry Potter, mana ọ na-emesi m obi ike na agaghị m echegbu onwe. O dere, sị:
Edere akwụkwọ ahụ n'ụzọ ọ bụghị ịkwado echiche na mgbaasị banyere Harry Potter. Anụla m site na nchịkọta ndị isi ndị na-agụtụbeghị okwu ọkpụite na ndị na-eto akwụkwọ ahụ!
Daalụ maka amara gị email! Enwere m olileanya na ịchọta akwụkwọ ọhụụ na-enye ume ọhụrụ ma na-akpali akpali maka ntụgharị uche gị! Fọdụ agwawo m na isi okwu banyere ụgha bụ naanị ọnụ ahịa akwụkwọ ahụ.
Daalụ, Tom! Gbalisie ike ile anya m mgbe ị bịara Indianapolis. Kọfị dị m!
Eziokwu, Eziokwu na Eziokwu
Mmetụta Digg: Mmechi… Ọ Na-enyere Aka?